Pnpkhabar.com | Nepali Online News, Videos & Entertainment दुई जनासित प्रेम, धोका नदिन दुवैसँग विवाह ! - Pnpkhabar.com
दुई जनासित प्रेम, धोका नदिन दुवैसँग विवाह !
काठमाण्डाै : भारतको छत्तिसगढको बस्तरमा एक जनाले एकै पटक दुई जनासित विवाह गरेका छन् । यो विवाह अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ । टिकरा लोहंगा गाउँमा विवाह सम्पन्न भएको हो ।
उनले भनेका छन्, ‘मैले दुई जनासँगै प्रेम गरेको थिएँ, कोही एक जनालाई धोका दिन सक्दैन थिएँ, मनमा केही प्रश्न थियो तर विवाहका लागि दुवै जना राजी भएपछि विवाहका लागि म पनि तयार भएँ ।’ चन्दूले सुन्दरी कश्यप र हसीना बघेलसँग एकै पटक विवाह गरेका हुन् । विवाहपछि सुन्दरी र हसीनाले आफूहरू पनि खुशी रहेको प्रतिक्रिया दिएकाे खबरमा उल्लेख छ ।
चन्दूले आफ्नो सम्बन्धबारे दुवै जनालाई भनेको र त्यो कुरा दुवै जनाले स्वीकार्दै एकैसाथ बस्न तयार भएकाे बताएका छन् । पहिला सुन्दरीसँग प्रेममा रहेका चन्दू पछि हसीनाको प्रेममा परेका थिए । तीनै जना एक साथ बसेको झण्डै एक वर्षपछि उनीहरूको विवाह भएको हो ।